Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: တောင်ကုတ်မြို့၌ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့် လူ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့မှုစတင်စုံစမ်း
ရန်ကုန်၊ ဇွန် - ၁၈
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်း ရိုက်နှက်မှုကြောင့် လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေများအား တွေ့ဆုံ
မေးမြန်းမှုများကို အမှတ်(၅)၊ စစ် ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ တောင်ကုတ်တွင် စတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ဇွန်လ ၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူများအား စုံစမ်းရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ယနေ့သုံးရက်မြောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း များကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး လူပေါင်း ၃၀ ကျော်လာရောက်ထွက်ဆိုသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းစုံစမ်းမှုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“လူတွေကို ဟိုဘက်ခေတ်ကလို စစ်ဆေးမှုမျိုးမပြုလုပ်ပါဘူး။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်က လာရောက်ဖြေကြားတဲ့လူတွေကို လေးလေးစားစားပြောဆိုဆက် ဆံပါတယ်။ အရပ်သား နား၊ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရရင်တော့ ကျေနပ်တယ်လို့ပြောရမယ်”ဟု အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် အခြားတစ်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီး ယခု ခေါ်ယူမေး မြန်းခံရသည့် တောင်ကုတ်မြို့မှ ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးက7Day News သို့ပြောသည်။
ယင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဇွန်လ ၆ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စစ်ဆေးရာ တွင်မှုခင်းဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၊ အုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်စဉ်ဦးဆောင်သူများ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၊ အခင်းမဖြစ်ပွား မီနှင့် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့) ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ထင် မြင်ယူဆချက်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့၏ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ သက်သေခံတို့နှင့်အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးကာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ နိုင်ငံ တော်သမ္မတထံ တိုက်ရိုက်အစီ ရင်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“မေးမြန်းတာတွေကို မနက် ၇ နာရီလောက်ကနေ ည ၇ နာရီ၊ ၈ နာရီလောက်အထိလုပ်တယ်”ဟု ယမန်နေ့က သွားရောက်ထွက်ဆိုခဲ့သည့် ဒေသခံတစ်ဦးက ပြော သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က တောင်ကုတ်-သံတွဲလမ်းခွဆုံရှိ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှ ဖုန်း၊ အမ်ပီဖိုးများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူ များရှိခဲ့ရာ ယင်းဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ရုပ်ဆင်တူသူများကို ရဲမှတစ်ဆင့် ခေါ်ယူကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့၊ ကျောက်နီမော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဧည့်နိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီအမျိုးသားသုံးဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ပစ္စည်း လုယက်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုဂယက်ကြောင့် တောင်ကုတ်မြို့တွင် ယင်းသို့ နောက်ဆက်တွဲ မှုခင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ၊ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားကာ နိုင်ငံတော်မှ နေ၀င်မီးငြိမ်းအမိန့်သာမက အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ရသည်အထိ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ရသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:06
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: တောင်ကုတ်မြို့၌ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့် လူ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့မှုစတင်စုံစမ်း . All Rights Reserved